‘नेपाल आइडल सिजन ३’ को फाइनलमा किरण, सज्जा र प्रविन, तपाईको भोट कसलाई ? « Pariwartan Khabar
‘नेपाल आइडल सिजन ३’ को फाइनलमा किरण, सज्जा र प्रविन, तपाईको भोट कसलाई ?
22 August, 2020 12:07 pm
नेपाल आइडल सिजन ३ अब चाडैँ नै सकिदैँछ । यस हप्ता प्रशारित एपिसोडमा उत्कृष्ट ४ बाट चितवनका केबिन ग्लान तामाङ बाहिरिएसँगै फिनालेमा बर्दिवासका किरण कुमार भुजेल, मोरङकी सज्जा चौलागाई र प्रविन बेडवाल पुगेका छन् ।
भोट कम भएका कारण केबिन उत्कृष्ट ४ बाट बाहिरिएका छन् । अब टप ३ मा पर्न सफल यिनै प्रतिस्पर्धीबाट नेपाल आइडल सिजन ३ को विजेता छानिनेछन् । यसपटक कोरोना करहका कारण नेपाल आइडल फिनाले दर्शकले लाइभ भने हेर्न नपाउने भएका छन् ।
नेपाल आइडल फिनालेमा दर्शकको जुन उत्साह र जाँगर थियो त्यो यसपटक कोरोनाका कारण हुन सकेन । टप ३ प्रतिस्पर्धीको भोटिङ लाइन खुल्ला भैसकेको छ । दर्शकबाट सर्वाधिक भोट पाउने प्रतिस्पर्धी नै नेपाल आइडल सिजन ३ को विजेता बन्नेछन् । त्यसैले सबैजनाले आफूलाई मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई जिताउनको लागि घर बसी बसी भोट गर्नुहोला ।
साउथ स्टार महेश बाबुले बाढी पिडितको लागि गरे १ करोड सहयोग
‘कपिल शर्मा शो’ लाई भल्गर शो भनेपछि कपिलले दिए यस्तो जवाफ…